अध्यक्ष कप : आयोजक रमाइलो युवा परिवार फाइनलमा प्रवेश - Nigranitimes
होमपेज / खेलकुद / अध्यक्ष कप : आयोजक रमाइलो युवा परिवार फाइनलमा प्रवेश
अध्यक्ष कप : आयोजक रमाइलो युवा परिवार फाइनलमा प्रवेश
आइतबार, असोज २४, २०७८ , निगरानी टाइम्स
असोज २४ गते, पथरी । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिमा जारी ६ नं. वडा अध्यक्ष कप फुटबल प्रतियोगितामा आयोजक रमाइलो युवा परिवार विजय हुँदै फाइनलमा पुगेको छ ।
आइतबार भएको खेलमा वडा नं. ३ लाई शुन्यको विरुद्ध १ गोल गर्दै आयोजक रमाइलो युवा परिवार फाइनलमा पुगेको हो । आयोजकको तर्फबाट तारामान लिम्बुले १ गोल लगाएका थिए । लिम्बुले लगाएको गोल नै निर्णायक बनेको थियो ।
खेलको म्यान अफ द म्याच आयोजक रमाइलो युवा परिवारका जीरिजा लिम्बु घोषित भए । म्यान अफ द म्याचको पुरस्कार महेश आर्चायले प्रायोजन गरेका थिए । खेलमा १ देखी ७ सम्मको वडा र आयोजक गरी जम्मा ८ टिम सहभागी भएका थिए ।
खेलमा पहिलो हुनेले नगद २५ हजार, ट्रफी, मेडल र प्रमाण पत्र र दोस्रो हुनेले नगद १५ हजार, ट्रफी, मेडल र प्रमाण पत्र प्राप्त गर्ने छ । भोली सोमबारको खेल वडा नं. ७ र ५ बिच खेल हुने खेल संयोजक असोक फुयलले बताए ।